MyChat - Chat in Myanmar application pour iPhone - téléchargement pour iOS de
ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲဖို့ ရှာမတွေ့ဘူးလား? မပူပါနဲ့! MyChat ကို ဒီမှာရယူပါ http://bit.ly/Download-MyChatMyChat ရပ်ဝန်းကိုချိတ်ဆက်၊ မိတ်ဆွေတွေဖွဲ့ပြီး နောက်ဆုံးပေါ်တွေ ရယူလိုက်ပါ!
MyChat ရပ်ဝန်းက မိတ်ဆွေကို ကြိုဆိုနေပါတယ်။ MyChat ကိုအသုံးပြုဖို့ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်!- မိမိရဲ့ဖုန်းနံပါတ် (သို့) ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်နဲ့ အကောင့်ပြုလုပ်ပါ။- ဖေ့စ်ဘုတ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဖုန်းထဲက သူငယ်ချင်းတွေကို SMS ပို့ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြား App တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး MyChat ရပ်ဝန်းကို ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးအောင် ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
ခေတ်မီစွာနေထိုင်ပါ- မိမိရဲ့ ပျော်စရာအချိန်တွေကို Feed မှာ ချက်ချင်းမျှဝေလိုက်ပါ။- သူငယ်ချင်းတွေ နောက်ဆုံးတင်ထားတာတွေကို Feed မှာ ကြည့်ပါ။- MyChat ရဲ့ ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ Lifestyle၊ ဗေဒင်၊ အဆိုအမိန့်များ၊ ဟာသများ၊ အားကစားနဲ့ ကျန်းမာရေးကနေ နောက်ဆုံးရ အကြောင်းအရာတွေကို ဖတ်ရှုလိုက်ပါ။- သင်အကြိုက်ဆုံး စာနယ်ဇင်းက နောက်ဆုံးရ အကြောင်းအရာတွေကို ဖတ်ရှုပါ။ Chelmo၊ မြန်မာတိုင်းမ်စ်၊ ဧရာဝတီ၊ လွင်ပြင်တို့ကို MyChat မှာ ဖတ်လို့ရနေပါပြီ။
မိတ်ဆွေတွေ တိုးဖွဲ့ပါ- “အနီးအနားရှိ သူငယ်ချင်းအသစ်များကို ရှာမည်”ကိုသုံးပြီး သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ ရှာပါ။- Feed မှာတွေ့တဲ့သူတွေကို သူငယ်ချင်းအဖြစ် ကမ်းလှမ်းပါ။
စိတ်ကြိုက်ပြောဆိုပါ- မိမိပြောချင်သလောက် အခမဲ့ပြောပါ။ MyChat မှာ အခမဲ့ပြောလို့ရနေမှတော့ ဖုန်းကနေ ဘာလို့မက်ဆေ့ခ်ျပို့နေဦးမှာလဲ?- လူအယောက် ၃၀ အထိ အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
ခံစားချက်မျိုးစုံကို ဖော်ပြဖို့ စတစ်ကာအလန်းစားတွေ ပါပါတယ်! မြန်မာတွေအတွက် သီးသန့်စတစ်ကာနော်!- ဘုံဘုံ- တုံတုံ- ဘုံဘုံနဲ့ တုံတုံရဲ့ ကျောင်းသားဘ၀- ကပ္ပတိန်ဘောလုံး- လယ်သမား- သင်္ကြန်စတစ်ကာ ၁ နဲ့ ၂- ဖိုးဝရုပ်- ဖိုးသာထူး- ဦးရွှေရိုး- ဒေါ်မိုး- တာယာပွကြီး- ဧရာဝတီလင်းပိုင်များ- မိုးရာသီက ၀သုန်နဲ့ မိုး
- အလန်းစားပုံတွေနဲ့ စတေးတပ်စ်တွေကို Facebook, BeeTalk, Line, WeChat, imo နဲ့ Viber တို့လို တခြား App တွေဆီ Share လုပ်မယ်
- စွယ်စုံရှာနိုင်တယ် - သူငယ်ချင်းတွေကို အလွယ်တကူရှာနိုင်ပြီး အဆက်အသွယ် စာရင်းကတဆင့် ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
အမြန်နှုန်းက ကောင်းမှကောင်း!- MyChat ကို သင့်ဖုန်းထဲမှာ အရမ်းမြန်ဆန်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ လျှပ်စီးလိုလျင်မြန်တဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီ ဓါတ်ပုံပို့ပြီး ချက်တင်ဝင်လိုက်ပါ။ - MyChat က သင့်ရဲ့ 3G ဒေတာအသုံးပြုမှုကို နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ဖန်တီးထားတဲ့အတွက် ပိုက်ဆံသိပ်မကုန်တော့ဘူးပေါ့!
ရှင်းလင်းသေသပ်တဲ့ အသွင်အပြင်ရှိတယ်- ခေတ်မီပြီး သုံးရလွယ်ကူတယ်။- မြန်မာ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာပါဝင်တယ်။- မြန်မာဖောင့်မျိုးစုံ အသုံးပြုဖတ်ရှုနိုင်တယ်။
MyChat ကို ကြိုက်ရဲ့လား? App ကို ကြယ် ၅ ပွင့်ပေးပြီး အဖြေပေးလိုက်နော်!
အသေးစိတ်သိရဖို့ www.mychat.com.mm ကိုသွားပါ။https://www.facebook.com/SquarMyanmar မှာ MyChat ကို Like လုပ်ပေးပါ။https://www.mysquar.com မှာ တခြား App တွေကို ရယူပါ